NEWYORK TIMES: Qadar Oo Daacishta Soomaaliya U Adeegsaneysa Dagaalka Ay Kula Jirto Imaaraatka [Warbixin]. – Shabakadda Amiirnuur
July 24, 2019 9:20 am by admin Views: 149
“Waan naqaanaa cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka, dad saaxibadeen ah ayaa fuliyey” sidaas waxaa yiri ganacsade Khaliifa Kaayid Al-Mohanadi oo 18-kii May telephone kula hadlayey safiirka Qadar ee Soomaaliya, hal todobaad ka dib markii uu qaraxaasi dhacay. Mas’uuliyada qaraxaas waxaa sheegtay kooxda Daacish, taas oo bishii May qoraal soo dhigay baraha Internetka ee ay wararka ku faafiyaan.
Ganacsade Al-Mohanadi oo sii hadlaya ayaa safiirka ku yiri: “Rabshadahaas waxaan ugu talagalnay inaan dadka reer Dubaay uga ceyrino halkan”. “ka leexo imaaraatka ha ceyriyaane si aysan u soo cusbooneysiin qandaraasyada lagula jiro, qandaraaskuna waxaan u soo wareerjin doonaa halkan Dooxa ah” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Sidaas oo kale wuxuu wargeysku la xiriiray ganacsade Al-Mohanadi kaas oo sheegay inay safiirka kala dhexeyso kaliya macrifo hore, ayna isku fasal ahaayeen yaraantoodii balse uusan jirin xiriir siyaasadeed oo ka dhexeeya. “Anigu waxaan ahay qof howlgab ah oo ganacsade ah, mana matalo wax dowlad ah” ayuu yiri ganacsadaha. Mar la weydiiyey sababta uu kooxda Daacish ee qaraxaas fuliyey ugu tilmaamay saaxiibo, wuxuu ku jawaabay: “Soomaalida oo idil waa saaxiibadeey”.